देउवालाई हराउने वा जिताउने महाधिवेशन प्रतिनिधिले हो, ‘फलानो’ले होइनः नैनसिंह महर - Dainik Nepal
नैनसिंह महर २०७८ असार २४ गते ८:२३
छलफल तपाई र मैले पनि गर्न पायौँ । कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् वा बाहिर जसले पनि जोसँग सम्वाद गर्न पायो । त्यसलाई मैले धेरै ठूलो अनर्थमा लिएको छैन । तर, उहाँहरू जत्तिको नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने हो ? भनेर सोँच्चनु पर्छ । पार्टीको पदाधिकारी हुनुहुन्छ । पार्टीको पूर्वपदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने हो ? र साझा नेता कसरी बन्न सक्ने हो भन्ने कुरामा जानुपर्ने हो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, सक्रिय सदस्यता वितरणको यती ठूलो समस्या छ, यसमा कन्ट्रिब्युशन गर्नुपर्ने थियो ।
बाहिर बसेर खाली कुनै जिम्मेवारी नलिएको व्यक्तिको जस्तै आफूलाई प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूको व्यक्तिगत कद घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सवालमा र सहयोग गर्ने विषयमा उहाँहरूको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनेर कार्यकर्ताहरूमा दोधार छ । उनीहरूलाई महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स दिलाउने हो । महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ । सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले महाधिवेशन यसरी सम्पन्न गर्छौ भनेर उहाँहरूले आधार तय गर्ने हो । त्यो अनुसारको काम गर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूलाई मेरो सुझाव पनि यही छ ।
कांग्रेससँग नेपाली जनता होलान् । तर, जनतासँगको सामिप्यता र सम्पर्क हाम्रो घटेको छ । राजनीतिले समाजको विकास र समाजलाई छोडेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । नेताको नेतृत्व अलग छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीति समाजसेवा होइन भन्ने प्रवृत्तिले जसरी जरो गाडेको छ, त्यसलाई हटाएर समाजसेवा नै राजनीति हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । अहिले राजनीतिभित्र नैतिक आचरणको कमी छ । राजनीति संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । राजनीतिमा कु–कर्म गर्ने व्यक्ति पनि छ । इमान्दार व्यक्ति पनि राजनीतिमा छन् । कु–कर्म गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा रह्यो भने इमान्दार राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई चित्त दुःख छ । राजनीति गर्नका लागि केही मापदण्ड हुन्छन् । राजनीति गरेर समाज र देशलाई समग्र परिवर्तन गर्छु भन्ने सोँच हुने व्यक्ति सशक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यक छ ।
शिक्षा र स्वाथ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो एजेण्डा हो । हुनेले दिने, नहुनेले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ । स्वास्थ्यमा पनि त्यही कुरा लागू हुनुपर्छ । सर्वसुलभ यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ । जलस्रोत र पर्यटनसहितको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विकासका सन्दर्भमा कति वर्षमा के काम गर्ने भनेर कांग्रेसले तालिका ल्याउनुपर्छ । संगठनका सन्दर्भमा एक व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको हरेक तहमा दुई कार्यकालभन्दा धेरै समय यही पदमा बस्न नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । आरक्षण र सहुलीयतका नाममा पहुँच भएको व्यक्तिले सधैँ लिने परम्परा तोडिनुपर्छ । अवसरको समान वितरण गर्नुपर्छ । एउटा मानिस सधैँका लागि भइराख्ने, अरुले कहिल्यै अवसर पाउँदै नपाउने भन्ने कुरा र जमिन्दारी प्रथा हट्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले सबैका लागि समान अवसरको बाँडफाँड गर्छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ ।